China Quality Webbing, Button, Plastic Bag Quatation Ma Suppliers - Angel Uwe Ngwa Co., Ltd.
Akwụkwọ anụ ahụ
Igodo mkpụrụ osisi
Companylọ ọrụ ahụ ewebatala ihe karịrị otu narị nke ngwa ngwa textile dị elu.
nkọwa â – ¶
Anyị na-enye arụmọrụ dị elu na ihe ngwọta dị iche iche maka ndị ahịa dị iche iche n'akụkụ ụwa niile Na enweta ya.
Angel e mere ka uwe ngwa N'ogbe na nile di iche iche nke ngwa imewe, mmepe, mmepụta na ahịa.
A na-ere ngwaahịa na Europe na ahịa United States na ụlọ mmepụta uwe ndị mba ọzọ na-ere ahịa, ugbu a ntụgharị kwa ọnwa nwere ike iru nde 3.
Bọtịnụ ube kristal
Ogwe ngwugwu data akara
Mbipụta Akwụkwọ Tissue
Pee plastic akpa
Angel Uwe Ngwa Co., Ltd.
Angel Garment Ngwa Co., Ltd. bụ ọkachamara na-emepụta crocheting, ụzọ abụọ na-enweghị atụ; Mgbanwe, eriri igwe, na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu puku ụdị ngwa ngwa ngwaahịa nke ụlọ ọrụ azụmaahịa dị elu. Ejirila ngwa ngwa ejiji akwa na udi ahia di iche iche, mmepe, mmeputa na ahia. Anyị ụlọ ọrụ nwere ike ahaziri dị ka dị iche iche chọrọ nke ndị ahịa, dị ka dyeing, rịbọn ngwaahịa na ìhè na-eguzogide, elu okpomọkụ na-eguzogide, mmiri na-eguzogide, adịghị ịjụ oyi na àgwà ndị ọzọ, na ngwaahịa na-ọtụtụ-eji uwe, akpụkpọ ụkwụ, okpu, akpa, ihe eji egwuri egwu, ụgbọ ala, ọrụ aka, ngwa ahụike na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dịka ihe inyeaka. Anyị ụlọ ọrụ e hiwere na 2010, emi odude ke ererimbot ọwọrọetop n'ichepụta obodo - Dongguan. Site na nkwonkwo aka nke ndị otu niile nke ụlọ ọrụ anyị, Angel Garment Ngwa aghọwo otu n'ime ezigbo ngwa ngwa ndị na-eweta ngwa ahịa n'ụlọ na mba ọzọ.
Mpi resin bọtịnụ
Gini mere ejiri mechie nkpuru ahihia ejiri kpuchie ya?
Fọdụ ndị ahịa na-eche na enwerekwa mkpọchi gburugburu akara aka. N'ezie, nke a bụ nghọta na-ezighi ezi. Aha akara a kpara akpa, nke bụ usoro nke mgbakwunye na-esote.
Gịnị bụ jacquard rịbọn jacquard rịbọn usoro nhazi
Jacquard mgbe ọdịdị nke rịbọn atọ akụkụ mara mma, jacquard ụkpụrụ inogide esemokwu, mgbe deformation.Brand Jacquard, logo o doro anya na anya, na-enwu gbaa na agba, dị nnọọ ọkwa, nwere ike ọ bụghị naanị na-abawanye kwukwara ngwaahịa nke ngwaahịa, Ọ nwekwara ike welie ika oyiyi .The pụrụ iche ụkpụrụ ...
Kedu ka esi amata ọdịiche nke webbing?
E nwere ọtụtụ ụdị ntanetị dị na ụlọ ọrụ webbing, nke a na-ejikarị eme ihe na ngalaba mmepụta ihe dị iche iche dịka uwe, mbipụta ụghalaahia, ihe akpụkpọ ụkwụ, akpa, ụlọ ọrụ, ọrụ ugbo, ngwa agha, na njem.
Dyeing usoro nke uwe ngwa webbing
nke a bụ ụzọ ụzọ abụọ maka agba agba rịbọnụ akwa. Otu bụ nke a kasị eji e ji esiji ákwà (ot dyeing), nke bụ tumadi na-emeso akwa rịbọn na a chemical e ji esiji ákwà ngwọta. Methodzọ ọzọ bụ iji agba agba, nke emere n'ime obere ihe anaghị acha uhie uhie maka ịrapagidesi ike na akwa ahụ. ya.
 Nke 6, Chashan Yayuan 3rd Street, Chashan Town, Dongguan City, Guangdong Province
© Copyright 2020-2021 Angel Uwe Ngwa Co., Ltd.